Tsy miditra am-piangonana aloha ny razana. Fanapahan-kevitra navoakan’ny fiangonana katolika io, mahakasika ny eto amin’ny arsidiosezin’Antananarivo. Voakasika amin’izany ny eglizy rehetra ato amin’ny faritra Analamanga, Itasy ary i Vakinankaratra. Ho fisorohana ny mety ho fipariahan’ny valanaretina hatrany ny anton’izao fanapahan-kevitra izao. Mitoetra hatrany koa ireo fepetra noraisina amin’ny fandrindrana ny fotoam-pivavahana hafa.
Tsy hatao sakana ny tsy fisian’ny “equivalence administrative des titres”. Naoty navoakan’ny minisiteran’ny Asa sy ny fampanana asa ary ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy io, mahakasika ireo mameno ny antontan-taratasy idirana ho mpiasam-panjakana, na ireo hiatrika fifaninanana. Fepetra noraisina taorian’ny nahitana ilay fibosesehana mitarika fitangoronana izany, ankoatra ny fahasarotan’ny fakàna azy ity. Ireo tafakatra amin’ny dingana famaranana ihany, na amin’ny fifaninanana toy ny an’ny ENMG, na ny fandraisana mpiasan’ny minisiteran’ny Fanabeazana, ny minisiteran’ny Asa ary ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka no mila izany ka efa misy lamina ny amin’izay.
Ahitana olana vaovao indray ny oniversiten’Antsiranana. Fantatra mantsy fa miditra amin’ny fahatelo volana tsy nandraisana karama ireo mpiasa misahana ny fandraharahana sy ny teknika (Pat). Araka ny vaovao voaray, tsy mahafantatra ireto farany ny anton’izao fahatarana izao, ary efa nandalo ny dingana rehetra amin’ny fangatahana hamahana ny olana. Miangavy ny tompon’andraikitra izy ireo hijery akaiky izany satria mitarika fahasahiranana maro ny tsy fandraisana karama.
Mikatona vonjimaika ny masoivohon’i Frantsa eto Madagasikara. Tapaka io noho ny fisian’ireo mpiasa maromaro tratry ny aretina Covid-19, taorian’ny valin’ny fitiliana natao. Hisorohana ny fiparitahana, mikatona nanomboka omaly hatramin’ny 19 avrily izao ny masoivoho. Ny fangatahana “visa” ho an’ny hamehana kosa, manaraka ny lamina sy fepetra ka misy ihany ireo mpiasa hanao “télétravail”.